Tobia 14 - Ny Baiboly
Tobia toko 14
Ny nahafatesan'i Tobia - Ny niverenan'i Tobia tany Media, sy ny nahafatesany.
1Toy izany no niafaran'ny tenin'i Tobia. Taty aorian'ny nahiratany dia velona roa amby efapolo taona Tobia, ka nahita ny zanaky ny zafiny. 2Roa amby zato taona no tontalin'ny andro niainany, ary nalevina tamin-panajana tany Niniva izy. 3Fa enina amby dimampolo taona izy, no tonga jamba, ary efa enimpolo taona izy vao nahiratra indray. 4Lany tamin'ny hafaliana avokoa ny andro sisa rehetra niainany, ary araka ny nandrosoany tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra no nitomboan'ny fiadanana nankafiziny.
5Nony efa ho faty izy, nantsoiny ho eo akaikiny avokoa Tobia zanany sy ny zafiny, zanak'io, fito mirahalahy, ka hoy izy taminy: 6Efa akaiky ny faharavan'i Niniva, fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary ny rahalahintsika tafaely aty, lavitra ny tanin'Israely dia hiverina any indray. 7Ka hisy mponina indray ny tanin'Israely rehetra efa zary efitra teo iny; haorina indray ny tranon'Andriamanitra efa nodorana teo iny, ary hiverina any avokoa izay rehetra matahotra an'Andriamanitra. 8Handao ny sampiny ny firenena ka ho avy ao Jerosalema sy honina ao. 9Hifaly ao avokoa ny mpanjakan'ny tany rehetra mitsaoka an'ilay Mpanjakan'Israely.
10Koa mihainoa ny rainareo, anaka, manompoa ny Tompo amin-pahamarinana, ary mikeleza aina hanao izay sitrany. 11Hafatrafaro ny zanakareo hanaraka ny rariny, hanao fiantrana, hahatsiaro an'Andriamanitra, ary hisaotra azy mandrakariva amim-pahamarinana sy amin'ny heriny rehetra.
12Ankehitriny, anaka, mihainoa ahy, ka aza mitoetra amin'ity tanàna ity, fa amin'ny andro handevenanareo an-dreninareo eo akaikiko, amin'ny fasana iray ihany, dia miaingà hiala aty, 13satria hitako fa hahatarika ny fandravana azy ny tsy fahamarinan'i Niniva.
14Koa nony maty reniny, dia niala tany Niniva Tobia mbamin'ny vady aman-janany sy ny zafiny ary niverina nankany amin'ny rafozany. 15Salama tsy marofy sy tratra antitra tsara no nahitany azy, dia izy no nikarakara an'ireo sy nanirina ny masony; nahazo ny lova rehetra tamin'ny tranon-dRagoela, ary nahita ny zanaky ny zanany hatramin'ny taranaka fahadimy izy. 16Nony efa velona sivy amby sivifolo taona tamin'ny fahatahorany ny Tompo izy, dia tamin-kafaliana no nandevenan'ny zanany azy. 17Naharitra tamin'ny toe-piainana tsara sy fitondran-tena masina, ny fianakaviany aman-taranany rehetra, ka notiavin'Andriamanitra sy ny olombelona ary ny tany ama-monina rehetra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0635 seconds